Uphengululo lweMicrodrone Smartview VR - Encinci | Uhambo lomntu wokuqala | Iindaba zeGajethi
Uhlalutyo lweMicrodrone Smartview VR
UMiguel Gaton | | Drones, Reviews
Ukuthatha ithuba leKrisimesi esondelayo, kwiintsuku ezimbalwa ezizayo esiya kuzo Ngenisa uphononongo oluninzi lweedrone kokubini ngaphakathi nangaphandle, njengoko iidrones ngokuqinisekileyo iya kuba yenye yezipho zeenkwenkwezi kulo nyaka. Namhlanje ukuqala siza kuyenza ngeMicrodrone Smartview VR, idrone encinci kakhulu elingana kakuhle entendeni yesandla kwaye njengeyona nto iphambili yayo ibandakanya inkqubo yevidiyo yokwenyani kunye neiglasi Iiglasi zeVR Drone Iya kusivumela ukuba sonwabele amava omntu wokuqala we-FPV wenqwelomoya into entsha kwizixhobo zobu bungakanani.
1 Ubungakanani obukhulu, ukusebenza okuphezulu
2 Ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa okulula
3 Bhabha kwisikhululo kunye ne-smartphone yakho
3.1 Khuphela usetyenziso lwe-iOS
3.2 Khuphela usetyenziso lwe-Android
4 Iiglasi zeVR Drone
5 Ezinye izinto zeMicrodrone Smartview VR
7 Inzuzo kunye nexabiso
8 Isiphelo seMicrodrone Smartview VR
9 Thenga iSmartview VR microdrone
Ubungakanani obukhulu, ukusebenza okuphezulu
Into yokuqala yokuqaqambisa malunga ne-microdone bubungakanani bayo obuncinci. Kunye ziisentimitha ezi-3 kuphela ububanzi Sijongene ne-microdrone encinci kodwa kodwa nangona kunjalo iza ixhotyiswe ngekhamera enamandla kakhulu ukuze ikwazi ukuthatha iifoto ezisemgangathweni kwaye Yonwabela ividiyo ngexesha lokwenyani.
Ukongeza kwikhamera, esi sixhobo simi kwelinye iqela lezinto ezisebenzayo nangona ziqhelekile kwiidrones eziqhelekileyo, aziqhelekanga kuluhlu lweemicronron ezinje nge iqhosha lasekhaya kunye ulawulo olupheleleyo. Elona candelo lokulawula libalulekile kwabo baqhele ukulinga kule ndlela yenqwelomoya ngelixa iqhosha lokubuyela ekhaya silibona ngakumbi njenge-anecdote, kuba kunqabile ukuba uyisebenzise kwimayikhrophoni eyenzelwe ukubhabha ngaphakathi.
Ikwabandakanya iqhosha lamandla ukuba abaqhubi baqale ukujikeleza kunye nenye Ukufika, ekufuneka siyigxininisile ukuba isebenza kakuhle.
Ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa okulula
El IMicrodrone Smartview VR Isixhobo esilula ngokwenene ukubhabha kwisitishi, esenza ukuba sibaluleke ngakumbi kufanelekile njengesipho sabantu abangenamava angaphambili kunye nokulinga kweedrones. Kuza kuxhotyiswa ngokhuseleko olususekayo kwiziphepheli eziya kuba luncedo kakhulu kwiiseshoni zokuqala zenqwelomoya, kodwa wakube ulawule idrone sicebisa ukuba uyisuse kwaye indiza ilula kwaye iyonwabisa ngakumbi ngaphandle kwayo.
Izipesheli isantya sendiza ezimbini, iyacotha kubantu abasandula ukuqala kwaye ikhawuleze ngakumbi kwabo basebenzisi ngakumbi, nangona isantya sesithathu senziwe ngaphantsi kwesantya sesithathu esifumaneka kwezinye izixhobo ezinobungakanani obufanayo esibavavanyileyo kwaye ezivumela ukuhamba ngamandla kombane kwaye kumnandi.
Njengoko kuqhelekile, ikwabandakanya imo ye-stunt yokwenza ii-loops eziqhelekileyo kunye nokujikeleza emoyeni.
Bhabha kwisikhululo kunye ne-smartphone yakho
I-Smartview VR ikulungele ukubhabha nokuba wena uqhuba nesikhululo eza ebhokisini ngokungathi uyayikhetha ulawulo kwi-smartphone yakho. Ukuqhuba nge-smartphone yakho, kuya kufuneka ufake usetyenziso olulandelayo (olufumanekayo lwe-iOS kunye ne-Android), vula idrone, qhagamshela i-Wi-Fi ye-smartphone yakho kwi-drone kwaye uvule usetyenziso kwaye yiyo loo nto.
Ngokwam, sikhetha ukubhabha kunye nesidlulisi sedrone, kuba imvakalelo eveliswa kukuchukumisa ngokwasemzimbeni ulawulo alunakuthelekiswa kwaphela nolwenza ngescreen esiphathwayo, kodwa kwabo basebenzisi bakhetha le ndlela yokubhabha, le microdrone iyayivumela .
Khuphela usetyenziso lwe-iOS
Khuphela usetyenziso lwe-Android
Umthuthukisi: PHAWULA mai
Iiglasi zeVR Drone
Umanyano lwe-microdrone kunye ne-VR Drone Izibuko zezinto ezivumela ukubonelela ngamava ahlukileyo kwesi sixhobo xa kuthelekiswa neemveliso zoluhlu olufanayo. Kuya kufuneka unxibelelanise i-smartphone yakho kwi-drone, cofa kwi icon ekuvumela ukuba wahlule isikrini kubini, faka i-smartphone kwitreyi yeglasi kwaye ukulungele ukuya. linga idrone yakho kumntu wokuqala.
Ividiyo yexesha lokwenyani isebenza kakuhle, kukho ukulibaziseka okuncinci kwividiyo kodwa kwamkelekile ukuba sijonga ukuba yidrone ebiza kunye neglasi ngaphantsi kwe- € 90 kwaye oko kuyasinceda ukuba siqale ukulingwa kwe-FPV.
Ewe kunjalo, sisixhobo esenzelwe ukubhabha ngaphakathi apho kuncitshiswa indawo, indiza ye-FPV icetyiswa kuphela abaqhubi beenqwelomoya abanesidanga esiphakathi sokulinga. Ukuba into oyifunayo kukwenza iimvavanyo zakho zokuqala kule ndlela yokubhabha, sicebisa ukuba uyisebenzise kwindawo enkulu yangaphakathi enjengeholo lezemidlalo okanye izinto ezinjalo kuba kungenjalo kuya kuba nzima kakhulu ukuba ungaphazami kwimizuzwana yokuqala ukusukela umntu ukuba amava anzima ukulinganisa umgama kakuhle kwaye uyazi ukuba ithini imeko yesixhobo ngokubhekisele kwindalo esingqongileyo.
Ezinye izinto zeMicrodrone Smartview VR
Idrone ine Ukuzimela kwenqwelomoya nge-6; Ibhetri inokuhlawuliswa ngokufaka isixhobo kwi-USB esinokuthi emva koko sixhume kumandla okanye kwikhompyuter, kodwa ngokuzikhethela kwakhona singayilayisha kwisitishi. Olu khetho lwesibini lubonelela ngentlawulo encinci kwaye ikwasebenzisa iibhetri zesikhululo, ke ngengqondo yenzelwe ukuyibiza xa sisesitratweni kwaye asinayo enye indlela.
Isikhululo sibonelelwe ngetitshala apho singabeka khona i-smartphone ukuze siyibone ividiyo ngexesha elifanelekileyo ngelixa siqhuba (kwimeko apho asifuni ukusebenzisa iiglasi). Inesiphatho esincinci sokuphatha imicodone kuyo ngendlela etofotofo.
IMicrodrone Smartview VR
Uphengululo lwe: UMiguel Gaton
Imo yokubhabha umntu wokuqala eneiglasi zeVR
Iimpawu eziphambili ezinje ngeqhosha lokufika, ulawulo olupheleleyo kunye nokubuyela ekhaya
Sikhumbula isantya sesithathu esikhawulezayo
Isiphelo seMicrodrone Smartview VR
Esi sisixhobo esimnandi nesisebenziseka lula ngokulingwa kwesiqhelo kunye nesikhululo okanye i-smartphone. Singayisebenzisa ngeglasi ukwenza inqwelomoya umntu wokuqala kodwa lukhetho kubaqhubi beenqwelomoya abanamava angaphambili.
Thenga iSmartview VR microdrone
I-microdrone ye-Smartview VR ixabisa i- € 89,90 kunye Singayithenga eJuguetrónica ngokunqakraza apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lweMicrodrone Smartview VR
I-Android 7.0 Nougat ye-Sony Xperia X kunye ne-X Icwecwe
I-Kickass Torrents izalwe ngokutsha kwi-domain entsha